Fikradaha lagu qurxiyo gurigaaga biyaano weyn | Bezzia
Fikradaha lagu qurxiyo gurigaaga biyaano weyn
Maria vazquez | 11/10/2021 20:00 | Dharbaaxo
Ma ciyaartaa biyaano? Ma jiraa qof guriga jooga oo baranaya sida loo isticmaalo qalabkan? Hadday sidaas tahay, waxaad u badan tahay inaad leedahay a biyaano darbi guriga. Iyagu waa kuwa ugu caansan waxaana jira laba sababood oo qasab ah tan: waxay qaadanayaan meel yar waxayna ka jaban yihiin biyaano weyn.
Pianos -ka waaweyni waa kuwo xarrago badan laakiin waxay u baahan yihiin inay helaan meel muhiim ah oo ay ku dejiyaan guriga. Haddii taasi aysan dhib kugu ahayn, maanta waxaan ku siinaynaa xoogaa fikrado ah inaad gurigaaga ku qurxiso biyaano weyn oo aad uga faa'iidaysato, adigoo ku hadlaya si qurxoon.
2 Meesha ugu fiican
2.1 Daaqad ku xigta qolka fadhiga
2.2 Ku xiga jaranjarada
2.3 Meel gaar ah
Pianos -ka weyn ee madow waa kuwa ugu caansan. Waa kuwa aan sida caadiga ah ka heli karno guryaha iyo kuwa u adeegsada qalab ahaan riwaayadaha iyo riwaayadaha. Aad bay u xarragoonayaan, lama dafiri karo. Si kastaba ha ahaatee, iyagu ma aha baddalka keliya; Waxa kale oo aad ku khamaari kartaa pianos -ka weyn ee bunni iyo caddaan ah si aad u qurxiso gurigaaga.
Sida had iyo jeer marka aan ka hadleyno midabka, doorashada midda saxda ah ayaa ku ciyaari doonta fadligayaga marka ay timaaddo in lagu gaaro qaab gaar ah qolka fadhiga. Pianos -ka weyn ee madow waxay ku habboon yihiin jawi kasta, si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad qolka siiso qaab casri ah oo haddana dabacsan oo dabiici ah, biyaano bunni ah waxay noqon kartaa saaxiibkaaga ugu fiican. Iyo bartilmaameedka? Caddaanku wuxuu buux dhaafiyaa shakhsiyadda wuxuuna si fiican ugu habboon yahay deegaanno aad u casri ah oo farshaxan leh.
Qolka fadhiga Caadi ahaan waa meesha caadiga ah ee la dhigo biyaano weyn, maxaa yeelay waa qolka ugu weyn guriga. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee lagu qurxiyo guriga piano -ga weyn ayaa sida caadiga ah waa meel la'aan, sidaa darteed way adag tahay in haddii aanan helin meel qolka fadhiga aan ku qaban karno qol kale. Laakiin keligeed baa beddel ah? Dabcan maya.
Daaqad ku xigta qolka fadhiga
Haddii fikraddaadu tahay inaad dhigto biyaano weyn qolka fadhiga, meel u hel daaqad u dhow. Markaa, waxaad ka faa'iideysan kartaa iftiinka dabiiciga ah marka aad rabto inaad garaacdo biyaano. Dhig rooga diirran hoostiisa biyaano, laambad casri ah, iyo qaar ka mid ah sawirrada derbiga si aad u abuurto koox soo jiidasho iyo farshaxan leh.
Waxaad kaloo u baahan doontaa saxaro lagu ciyaaro biyaano iyo kursi ama pouf raaxo leh haddii ay dhacdo in qof doonayo inuu fadhiisto oo ku dhegeysto. Haddii meeshan ama agteeda aad sidoo kale fursad u leedahay inaad ku darto khaanadda shaqada, waxaad ku dhejin kartaa dhammaan buugaagtaada iyo dhibcahaaga.
Ku xiga jaranjarada
Guryaha waaweyn leh jaranjarada dhexe iyo meel ballaaran oo ku hareeraysan kuwan, waxaad ka faa'iideysan kartaa tan si aad u dhigto biyaano. Waa beddel weyn oo lagu buuxiyo boos caadi ahaan iska leh hoolka ama qolka fadhiga oo aan had iyo jeer fududayn in la qurxiyo.
Jaranjarooyinka wanaagsan iyo derbiyada nadiifka ah ayaa ah waxa aad u baahan tahay oo dhan si aad piano -gaaga u ekaato mid wanaagsan. Waa mid ka mid ah fikradaha lagu qurxiyo gurigaaga biyaano weyn. casri ah oo gaar ah, Dabcan. Waxay noqon doontaa waxa ugu horreeya ee martidaadu arkaan marka aad ku soo dhoweyso guriga.
Ma leedahay a qol saqaf yar ama qaawan guriga? Tani waxay noqon kartaa meel ku habboon oo lagu hoydo biyaano weyn iyo ku celcelin. Uma baahnid inaad aad u weyn tahay; Waxaad kaliya u baahan doontaa boos biyaano, dhowr kursi iyo kaydinta si aad u kaydiso buugaagtaada iyo muusikada xaashida ah.
Haddii aad haysato meel bannaan oo aad ugu beddesho qolka biyaano waxa ugu fiican ayaa ah in laga dhawaajiyo. Markaa waad ku celcelin kartaa intaad rabto adigoon "dhibin" xubnaha kale ee qoyska ama adigoon ku dhibin. Waxaad awoodi doontaa inaad xoogga saarto biyaano. In kasta oo aad u baahan doonto wax ka badan dhowr dhawaaq oo aan lahayn dhawaaq si aad xoogga u saarto. Wayna adag tahay in meel xoog la saaro haddii ay qabow tahay oo aan la soo dhaweyn.
Dhig roogga meel bannaan, qaar ka mid ah kuraasta gacmaha, xoghaye yar -Haddii aad qorto muusiggaaga- oo aad daryeesho iftiiminta, gaar ahaan haddii aadan lahayn albaab weyn oo iftiin dabiici ah. Isku dar iftiin guud iyo kuwo kale oo aad isugu dhow oo kuu oggolaanaya inaad gaarto deegaanno kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Dharbaaxo » Fikradaha lagu qurxiyo gurigaaga biyaano weyn
Ballerinas, kabo raaxo leh oo lagu degdego maalmaha qoraxda